कन्सलटेन्सी व्यवसाय व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्छ |
कन्सलटेन्सी व्यवसाय व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्छ
प्रकाशित मिति :2018-05-08 11:31:42
उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन)
प्रबन्ध निर्देशक, निमास एजुकेशन कन्सलटेन्सी
फेकनको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । समग्र कन्सलटेन्सी व्यवसायको विकासमा के कस्ता काम गर्न सकिन्छ ?
एजुकेशन कन्सलटेन्सी व्यवसाय प्रत्येक समय विकासको क्रममा छ । विगतको तुलनामा व्यवसायीहरु मर्यादित बन्दै गएका छन् । विद्यार्थीहरुले सही सूचना पाएका छन् । मन्त्रालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भएर निर्देशिका पालना गर्दै काम गरिरहेका छन् । तालिम लिएर आफूलाई अझ बढी सक्षम बनाउँदै लगेका छन् । विस्तारै यो परिवर्तन हुँदै गएको छ । अझै केही सुधारहरु छन जसलाई हामीले नीतिगत तहमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कन्सलटेन्सी व्यवसायलाई नियमन गर्नका लागि बनाइएको निर्देशिका मै परिवर्तन गर्नु जरुरी देखिन्छ । कतिपय कुरामा निर्देशिका नै बाँझिएको देखिन्छ । यसले हामीलाई काम गर्नका लागि समस्या भइरहेको छ । निवकरण गर्नेदेखि दर्ताको प्रक्रियामा सुस्त गतीमा चलिरहेको छ । त्यस्तै, दर्ताको प्रक्रिया पनि प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन् । र यो कुरा मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरिसकेको कुरा हो ।
यसका लागि के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
हामी कन्सलटेन्सी व्यवसायीहरुले भनेको के हो भने सबै अनलाइन प्रणाली हुनुप¥यो । विगतमा हाम्रै सुझावमा अनलाइन प्रणालीका लागि अग्रसरता नदेखाएको होइन । यसका लागि मन्त्रालयले काम पनि अगाडि बढाएको हो । तर अहिलेसम्म त्यो काम पूरा हुन सकेको छैन् । अहिले एउटा कन्सलटेन्सीको फाइल खोज्न घन्टौ समय लाग्छ । अनलाइनबाट भयो भने त्यो निकै सहज हुन्छ । सबै अनलाइन प्रणालीमा भयो भने मन्त्रालयलाई पनि सहज हुने र हामीलाई पनि सहज हुने भयो । यसले तथ्यांक संकलन गर्न पनि सहज हुन्छ ।
कन्सलटेन्सी व्यवसायलाई अहिले प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर एक वर्षमा मन्त्रालयले नविकरण गर्न समेत सकेको छैन् । त्यसैले यसलाई कम्तीमा ५ वर्षका लागि भयो भने हामीलाई पनि सहज हुन्छ । २ हजारभन्दा बढीले दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यो काम मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन् । त्यसमाथि नविकरण काम अगाडि बढाउनै सकेको छैन । त्यसैले कन्सलटेन्सी व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउनका नविकरणको प्रावधान कम्तीमा ५ वर्ष वा त्यो पनि नसकिए ३ वर्षको प्रावधान राख्दा सहज हुन्छ ।
यस क्षेत्रमा विद्यार्थीले भोग्नु परेका समस्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?
विद्यार्थीका हकमा खास गरी २ वटा समस्या देखिएका छन् । पहिले एनओसी लिने समय मै समस्या देखिन्छ भने अर्को ट्युसन फिको प्रोटेक्सनको कुरामा देखिन्छ । यसको समस्या समाधानका लागि सरकारले एनओसी लिने बेलामा विद्यार्थीलाई समस्या सिर्जना गरिदिनु भएन । सरकारले नै विद्यार्थी कुन देशमा जान मिल्ने, कुन विश्वविद्यालय वा कलेजमा जान मिल्ने भन्ने पहिले नै यकिन गर्न सक्यो भने त्यही अनुसार एनओसी जारी गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सकेमा मात्रै विद्यार्थीले एनओसी लिने समयमा समस्या बेहोर्नु नै पर्दैन् । कतिपय अवस्थामा एनओसी लिन मात्रै १ सातासम्म कुर्नपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि एनओसी लिनका लागि अनलाइनबाट फारम भर्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि अनलाइनबाट फारम भर्ने प्रणाली ल्याएको खण्डमा समस्या समाधान भइसक्छ । र यो त्यती ठूलो विषय पनि होइन । दृढ इच्छा शक्ती हुने हो भने छोटो समय मै काम गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो समस्या भनेको ट्युसन प्रोटेक्सनको कुरा हो । बीमा गर्नु समस्या समाधानको विकल्प हो तर हाम्रो हकमा त्यो लागू गर्न व्यवहारिक रुपमा सकिन्न । विद्यार्थीको पैसा विदेशमा जान्छ । नेपालमा रहने कुरा भएन । जब पैसा आफूसँग रहन्न त्यसको बीमा सरकारले कसरी गर्न सक्छ । यो सम्भव कुरा होइन । तर सरकार सम्बन्धित देशसँग छलफल तथा वार्ताका माध्यमबाट नेपाली विद्यार्थीको ट्युसन प्रोटेक्सनको सम्झौता गर्न भने सक्छ । जस्तो अहिले अष्ट्रेलिया तथा न्यूजिल्याण्ड जाने विद्यार्थीको हकमा त्यो सुविधा छ भने अन्य देशको हकमा छैन् ।
यी काम गर्नका लागि कन्सलटेन्सी व्यवसायमा रहेका फेकन जस्तै इक्यान र आइरिनसँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ ?
हामी तीन वटा भिन्दा भिन्दै संघमा आबद्ध भएर पनि काम गर्ने थलो एउटै हो । उद्देश्य पनि एउटै हो । कतिपय अवस्थामा नीतिगत तहमा छलफल तथा बहस गर्दा हामीबीच तर्क फरक परे पनि हामी सँगै मिलेर जानुको विकल्प रहन्न । त्यसैले विगतका दिनहरुमा जस्तै आगामी दिनमा पनि हामी संस्थाहरुबीच एक जुट भएर एउटै मुद्धा लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि हामीले समय समयमा छलफल तथा बहस पनि गरिरहेका हुन्छौ । केही दिन अगाडि फेकनले इक्यान र आइरिनसँग टीआईटीआईको तालिमका विषयमा छलफल ग¥र्यौ । त्यसबाहेक सरकारले बढाएको तालिम शुल्क २ हजार रुपैयाँले कम गर्न सफल भयौ । सरकारले १२ हजारबाट एकैपटक ४ हजारले बढाएर १६ हजार पु¥याएको थियो । त्यसलाई १४ हजार रुपैयाँमा कायम ग¥यौ । निरन्तर रुपमा काम मिलेर काम गरिरहेका छौ र आगामी दिनमा पनि यो सहकार्य निरन्तर नै रहनेछ ।
कक्षा १२ परीक्षा दिएर विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
विद्यार्थीहरु स्वदेश वा विदेश जहाँ पढ्न सक्छन् । स्वदेश मै पनि राम्रा विश्वविद्यालयहरु छन् । विदेश पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरुले आफूले कुन देशमा, कुन विश्वविद्यालयमा पढ्न जान चाहेको हो त्यो पहिले नै बुझ्नुपर्छ । विद्यार्थीको आफ्नो आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? भाषा माथिको दक्षता कत्तिको छ ? शैक्षिक पुष्ठभूमि कस्तो छ त्यसैका आधारमा विदेश जाने वा नजाने तय गर्नुपर्छ । यती भइसकेपछि राम्रो र भरपर्दो कन्सलटेन्सीबाट विदेश जाँदा विद्यार्थीलाई समस्या पर्दैन् ।
निमास एजुकेशनले के कस्ता सेवा प्रदान गरिरहेको छ ?
निमासले खास गरी अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, युरोप, अमेरिका, क्यानडालगायतका मुलुकका लागि काम गर्दै आएको छ । साथै एमबीबीएसका लागि फिलिपिन्स, चीन तथा बंगलादेशमा विद्यार्थीहरु पठाउँदै आएको छ । केही समय अगाडि मात्रै निमासले विद्यार्थीलाई लक्षित गरी निमास एडु मोबाइल एप्स निर्माण गरेको छ । जसको माध्यमबाट विद्यार्थी निमास र विदेशी शिक्षाबारे मोबाइल एप्सबाट प्राप्त गर्न सक्छन् । मनमा लागेका प्रश्नका उत्तरहरु खोज्न सक्छन् । त्यहीबाट कागजपत्र पठाएर अप्लाइन गर्न पनि सक्छन् ।